Nisokatra indray ny hotely Cairo Landmark: Sheraton Cairo Hotel & Casino
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Nisokatra indray ny hotely Cairo Landmark: Sheraton Cairo Hotel & Casino
Sheraton Hotels & Resorts, ampahany amin'ny Marriott International, Inc. dia nanambara ny fisokafan'ny Sheraton Cairo Hotel & Casino (www.SheratonCairo.com) malaza, tanàna iray manan-tantara nandritra ny efa-polo taona mahery. Fanokafana be vinavinaina indrindra ny trano fandraisam-bahiny, mipoitra taorian'ny fanavaozana be dia be mba hanehoana hatsarana miavaka sy mavitrika miaraka amin'ny atitany maoderina, toerana malalaka ho an'ny daholobe ary foto-pisakafoana vaovao sy novelomina. Miorina eo amoron'ny Ony Nile, izy dia manana toerana lehibe, eo afovoan-tanàna, tsy lavitra ny Tranombakoka Egyptianina, Kairo Opera House ary ilay tantara misy andohalambo 70 misy an'i Kairo. Miaraka amin'ny traikefa marika sonia sy ny hafanan'ny serivisy Sheraton mahazatra izay mandeha ambony sy mihoatra mba hahatonga ny traikefa vahiny ho misy dikany, ny hotely dia vonona hamerina haingana ny voninahitry ny taloha.
"Sheraton Cairo no hotely Sheraton voalohany teto Afrika ary nanjary sary famantarana teo an-toerana hatramin'ny nisokafany tamin'ny 1971," hoy i Alex Kyriakidis, filoha sady talen'ny fitantanana, Moyen Orient sy Afrika, Marriott International. "Ny fisokafan'ity trano fandraisam-bahiny ity dia dingana lehibe amin'ny diantsika satria tsy vitan'ny hoe mampiseho ny ezaka fanovana manodidina ny marika Sheraton izy io, fa mamerina ny fanolorantenantsika ho an'i Egypte ho tsena fitomboana stratejika."
Ny efitrano sy efitrano 326 nohavaozina tanteraka tao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia ahitana fifangaroana mirindra amin'ny endrika maoderina miaraka amin'ny paleta mafana izay manome fampiononana tsy manam-paharoa sy ny Sheraton Signature Sleep Experience. Ny efitrano Sheraton Club dia manolotra fidirana manokana mankany amin'ny Sheraton® Club Lounge, toerana tsy miankina iray eo amin'ny rihana faha-26 izay manome fahitana mahatalanjona an'ny tanàna, izay ahafahan'ny vahiny mankafy sakafo maraina, zava-pisotro ary tsakitsaky fanampiny mandritra ny andro. Ny toeram-pialam-boly dia misy foibe fanatanjahan-tena midadasika miaraka amin'ny fitaovana fanapahana misy 24 ora isan'andro ho an'ny vahiny ao an-trano, dobo filomanosana ary ivon-tobim-pahasalamana feno
Trano fisakafoanana sy fisotroana mampiavaka enina no mamorona fitsangatsanganana mahandro sakafo ary manome traikefa tena izy sy tsy manam-paharoa. El Mawardia Depuis 1985, andrim-piarahamonina eo amin'ny ilany andrefan'ny reniranon'i Neily mandritra ny 30 taona mahery, toerana iray hijerena sy hahitana azy dia niverina tamina avatar vaovao iray mampiseho ny sakafo eo an-toerana ampiarahina amin'ireo ankafizin'ny iraisam-pirenena miaraka amina karazana kafe, dite, zava-pisotro ary koa tsiro shisha tokana. Giannini's, trano fisakafoanana italianina New York italianina voalohany any Egypt, izay manadihady ny hafaliana amin'ny fisakafoanana iraisana rehefa manomana lovia manokana ilay chef malaza dia azo antoka fa mampirongatra ireo tsirony voadio indrindra. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny dia mistika sy ireo tany majika maro ary fitsangatsanganana izay nahita ny toerany tamin'ny lova ejipsiana, Rawi manasongadina ireo fangaro tsy misy fahita avy amin'ny akora ao an-toerana sy ny sakafo arabo isam-paritra izay manome ny tsirony miavaka sy ny mombamomba azy manokana amin'ny menio amin'ny sakafo maraina, atoandro ary hariva. Afaka manantena ny hanomboka ny andro ny vahiny amin'ny kafe vaovao, mofomamy ary zava-manitra atolotra ao amin'ny Café Bridge miorina ao amin'ny efitrano malalaky ny hotely, alohan'ny hifindrany amin'ny Pool Bar hankafizanao ny rivo-piainana mahafinaritra sy ny menio fifangaroan'ny eklectika mifangaro ary arahin'alina hariva mozika sy cocktail mahazatra ao amin'ny Studio70.
Miaraka amin'ny 1400 metatra toradroa ny efitrano fivoriana natokana sy tsy manam-paharoa, Sheraton Cairo Hotel & Casino dia manana efitrano fandraisam-bahiny voatendry, efitrano fivoriana 13 ary ivon-toeram-pivarotana feno fitaovam-piasana, miaraka amin'ny fotodrafitrasa manara-penitra sy fifandraisana tsy misy tohana amin'ny avo Wi-Fi hafainganam-pandeha. Ny trano fandraisam-bahiny dia manome safidy sy fahaleovan-tena miaraka amina serivisy mieritreritra sy manokana ka mahatonga azy io ho safidy manokana ho an'ny fivorian'ny orinasa lehibe, ny hetsika ara-tsosialy, ny fampakaram-bady na ny fivoriana akaiky kely kokoa.
"Nandritra ny 45 taona mahery, maro ny mpitsidika no gaga tamin'ny zava-mahatalanjona manodidina ny Sheraton Cairo Hotel malaza ary niaina ny serivisy mafana sy mandray azy ireo," hoy i Hans Joerg Kreitner, Tale jeneraly, Sheraton Cairo Hotel & Casino. "Manolo-tena izahay hizotra any ambony sy any aoriana mba hamerina ilay fampanantenana rehefa manomboka diany vaovao iray izay avy amin'ity lova sarobidy sy sarobidy ity."
Ny Marriott International dia miasa amina hotely 18 any Egypt manerana ny marika 7 ao anatin'izany ny JW Marriott, The Ritz Carlton, Le Méridien, Marriott Hotels, Renaissance, Sheraton ary Westin. Izy io koa dia manana trano fandraisam-bahiny roa eo an-dàlam-pamolavolana mandroso ao anatin'izany ny Mena House sy The St. Regis Cairo.
Dubai - Phnom Penh: Sidina farany natolotry ny Emirates